Android Oreo တွင်စျေးကွက်ဝေစုအလွန်နည်းသည် Androidsis
Android Oreo စျေးကွက်ဝေစုကအရမ်းနည်းနေသေးတယ်
လတိုင်း Google က၎င်း၏ Android ဖြန့်ဖြူးမှုအစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်သည်။ ဤအစီရင်ခံစာကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည် operating system တစ်ခုချင်းစီ၏စျေးကွက်ဝေစု ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး။ ဤနေရာတွင်ဒီဇင်ဘာလအတွက်အချက်အလက်များရှိပြီးဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့အံ့သြစရာအနည်းငယ်ကိုရှာဖွေပေမယ့်အားလုံးအပေါငျးတို့သဘယ်မှာရှိ စိတ်ပျက်စရာ Android Oreo ပုံ.
La operating system ဗားရှင်းအသစ်သည်မချွတ်ဘဲမပြီးပါ ထိုသို့နှေးကွေးလွန်းမှာဆက်လက်ဆောင်ရွက်သည်။ ဂူဂဲလ်တွင်အချို့သောစိုးရိမ်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးဖြစ်သောအရာ။ ဤအတောအတွင်း, Android Nougat သည်လမ်းပေါ်တွင်ရှိနေသည် အသုံးအများဆုံးဖြစ်လာဖို့။
Android Oreo ကိုလွန်ခဲ့သောလေးလကဈေးကွက်တွင်ရောင်းချခဲ့သည်။ သို့သော်ယခုအချိန်အထိ OS စနစ်၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းသည်စျေးကွက်တွင်တိုးတက်မှုနှေးကွေးနေသည်။ စျေးကွက်ဝေစု၏ ၀.၅% သာရှိသည် ဒီဗားရှင်းပိုင်။ မျှော်လင့်ထားတာထက်နှေးကွေးနေတဲ့အတွက်အနည်းငယ်စိုးရိမ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ပုံ။ အထူးသဖြင့်ငါတို့ဘယ်လိုမြင်နေကြတာလဲ များစွာသောဖုန်းများသည်ဤရက်သတ္တပတ် update လုပ်နေကြသည်.
Marshmallow ဦး ဆောင်နေဆဲလပေါင်းများစွာဖြစ်ပွားနေသောအရာ။ ဒါပေမယ့်ကောင်းတာကဈေးကွက်ဝေစုကတဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းလာတာကိုမြင်နေရတာပါ။ လက်ရှိတွင် ၂၉.၇% ရှိသည်။။ ဒုတိယအနေဖြင့်ငါတို့ရှာပါ Lollipopလက်ရှိ 26,3% နှင့်အတူ။
ဒီဂူဂဲလ်အစီရင်ခံစာမှသတင်းကောင်းကိုကြည့်ဖို့လိုသည် Nougat လအနည်းငယ်ကြာသိသိသာသာတိုးပွားလာခဲ့သည်။ ယခုတတိယနေရာတွင်ရှိပြီးပထမနှစ်ခုနှင့်ပိုနီးသည်။ လက်ရှိစျေးကွက်ဝေစုသည် ၂၃.၃% ရှိသည်။။ လအနည်းငယ်အတွင်းမှာဒုတိယဖြစ်လိမ့်မည်၊
Android Oreo မှာလုပ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်ယခုအချိန်အထိ၎င်း၏စျေးကွက်ဝေစုသည်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်။ လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်များအတွင်းပိုမိုမြန်ဆန်စွာရွေ့လျားမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့် ကျွန်ုပ်တို့စက်များပိုများလာသည်နှင့်အမျှဖြစ်ပျက်လာမည့်အရာမှာ operating system ၏ဤဗားရှင်းရှိသည်။ Android Oreo စျေးကွက်ဝေစုကိုမင်းဘယ်လိုထင်သလဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » Android ဗားရှင်း » Android Oreo စျေးကွက်ဝေစုကအရမ်းနည်းနေသေးတယ်